Maxaa caawa laga filin karaa dowladda Itoobiya haddii hogaanka TPLF ay isasoo dhiibi waayan? | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Maxaa caawa laga filin karaa dowladda Itoobiya haddii hogaanka TPLF ay isasoo...
Maxaa caawa laga filin karaa dowladda Itoobiya haddii hogaanka TPLF ay isasoo dhiibi waayan?
Wakhtigii uu u qabtay hoggaamiyaasha Tigrayga inay isku soo dhiibaan ayaa caawa lix saac ku eg. Ciidamada waxay sheegeen in haddii wakhtigaas uu dhammaado caawa, ay weerari doonaan Mekelle.
Haddii dagaal ku dhex maro ciidamada dawladda dhexe iyo ciidamada TPLF way adkaan-doonta soo afjarida dagaalka maadama ay magaalada tahay magaalo Buured isla markaana ciidamada TPLF ay dhufesyo wawayn oo Strategy ah sameystan sida laga helayo ilo yar o xog-ogaal ah maadama is-gaarsinta degaankas go’antahay.
Haddii Abiy dagaalka ku gulaysto oo Maqale qabsado waxa suurta gala in TPLF duurka gasho oo ay u dagaalanto ku dhufo oo ka dhaqaaq, isla markasna waxay u jiheysan-doonta dagaalo qaraar oo hor leh rabsahdo iyo qalalaase hor leh waxaana iskaba raaci-doona kacdoona fara badan oo galaafan kara Raysal wasaare Abiy Ahmed sumcadiisa.
Gudaha Itoobiya marka la eego dadka qaar ayaa la sheegayaa in ay aaminsanyihiin in ra’iisul wasaaraha Itoobita Abiy Axmed uu ku degdegay go’aanka waqtiga uu ugu qabtay TPLF iyadoo dadka aaminsana fikirkaan ay sheegayaan in ay aheyd in uu go’doon galiyo si marka ay tabar yareeyaan ay u oggolaadaan wahadal.
Xaaladda gobalka waqooyiga Itoobiya ee Tigray ayaa u muuqata mid cakrin waxaana dad badan oo rayad ah dagaallada halkaa ka socda ay ku qasbeen in ay naftooda la baxsadaan iyagoo si maalin leh ahna u gaaraya dalka ay dariska yihiin Itoobiya ee Suudaan.